Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Mr. Giorgio Napolitano, President of the Italian Republic – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Mr. Giorgio Napolitano, President of the Italian Republic
U Myint Naung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Italian Republic, presented his Credentials to His Excellency Mr. Giorgio Napolitano, President of the Italian Republic, on3December 2014 in Rome.
Dated. 12 December 2014
အီတလီသမ္မတနိုင်ငံံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်နောင်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ရောမမြို့၌ အီတလီသမ္မတနိုင်ငံံံ သမ္မတ မစ္စတာ ဂျော်ဂျီယို နာပိုလီတာနိုထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်